Kudzoka kwaVaSikhala kuMDC T Koonekwa neNzira Dzakasiyana
WASHINGTON DC — Kudzoka kubato reMDC T kwevaive mutungamiri weMDC 99, VaJob Sikhala, nevamwe vavakambobuda navo muMDC, VaJoubert Mudzumwe, kuri kuonekwa nemaziso akasiyana siyana.
Vamwe vanoti danho iri rinogona kusimbisa bato rinotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, panguva iyo rakatarisana nemakakatanwa.
Asi vamwe vanoti zvaitwa naVaSikhala hazvina pundutso yazvinopa kuMDC T.
Mukutanga kwegore rino, VaSikhala vakazivisa kuti vakanga vabatana kuti vashande pamwe nebato idzva reNational Constitutional Assembly, iro riri kutungamirwa pari zvino naVaLovemore Madhuku.
Kudzoka kubato reMDC T kwaitwa uku kunoitika panguva iyo mubato iri muine mapishapisha anonzi angangoita kuti bato iri ripatsanuke zvakare sezvakamboitika muna 2005 apo VaSikhala naVaWelshman Ncube nevamwe vakasiya MDC vachinotangawo mapato avo, ayo anonzi akatadza kunyatsoita mutsindo.
Munyori mukuru webato iri, VaTendai Biti, vanonziwo havasi kufara nedanho rakatorwa nebato iri rekumbomisa mutevedzeri wemubati wehomwe, VaElton Mangoma, basa nekuda kwekurudziro yavo yekuti VaTsvangirai vasiye chigaro.
Mukuru wesangano revechidiki, reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe-YIDEZ, VaSydney Chisi, vanoti vanotsigira VaTsvangirai, uye danho ratorwa naVaSikhala iri rakakosha zvikuru sezvo richivhurirawo vamwe mukana wekudzokawo kubato iri kana kubva kuZanu PF.
VaChisi vanoti kudzoka kwaVaSikhala kunoratidza kuti MDC T harisi bato remunhu asi kuti chirongwa chevanhu vane muonero mumwechete.
Asi nhengo yeZanu PF, VaGadzira Chirumhanzu, vanoti kubatana zvakare kwaVaTsvangirai naVaSikhala mucherechedzo wekukundikana kwevanhu vaviri vafunga kuti zvimwe vakabatana vane chavangabuda nacho.
VaChirumhanzu vanoti hapana asiri kuona kurwisana kuri muMDC T pari zvino, uko kunogona kutsemura bato iri zvekuti ani nani zvake ane njere haangapindi mubato rakadaro.
Hurukuro naVaSydney Chisi pamwe naVaGadzira Chirumhanzu